Samarekha.com.np :: महिला शक्ति र दशैं |
|| 660 Views || Published Date : 3rd January 2017 |
प्राचिनकालमा महिलालाई सिर्जनाको मूल शक्ति मानेर पुजिन्थ्यो । जसलाई आध्यात्मिक, मानसिक र भौतिक शक्तिको प्रतिकको रुपमा सामाजिक उत्सव, ध्यान, पूजा आराधना, उपासनाआदिको परम्परा चलाइयो । अहिले पनि यो क्रम चलिरहेको नै छ । तर समाज व्यवहारमा हेर्ने हो भने नारी र शक्ति सम्बन्धको प्रचलित अवस्था विचित्रको छ । एकातिर सिर्जनाकी श्रोत सृष्टि र प्रलयकी कारण मानेर धुमधामसँग पूजा आराधना गर्ने अर्कोतिर शिक्षादिक्षा, सम्पत्ति र सामाजिक स्वतन्त्रताबाट बञ्चित गरी पुरुषको अधिन, दासी या व्यक्तिगत सम्पत्तिजस्तै व्यवहार गर्ने गरिएको छ । यही दोहोरो मापदण्ड, विकृत, विसंगत व्यवहारका कारण आज परिवार, समाज, राष्ट्र र सिंगो विश्वमा महिलाको स्थान कमजोर हुन गएको हो भन्न सकिने थुप्रै आधारहरु हामीसँग छन् ।
चाडपर्वको मौसम शुरु भएको छ । दशैं, तिहार, छठलगायतका पर्व नजिकिँदै छन् । दशैं नारी शक्तिकी प्रतिक देवीको सम्मानमा मनाइने निकै पुरानो चाड हो । दशैं बाहेक अरु चाडमा पनि कुनै न कुनै रुपमा नारी शक्तिको सम्मान र आराधना हुने गर्छ । यसरी चाडपर्वमा, दैवी या प्रतिकका रुपमा आदिकालदेखि सम्मानित नारीको स्थिती किन पछि आएर निकै तल खस्क्यो ? यो विषयमा गंभीर चिन्तन गर्नु अब ढिलो गर्नु हुन्न । विद्यमान दोहोरो मापदण्डको अन्त्य गरी महिलामाथिका सबैखाले थिचोमिचो, अन्याय र विभेद अन्त्यगर्ने संकल्प गर्न यदि सकिँदैन भने देवीको नाममा गरिने पूजाको अब कुनै अर्थ रहनेछैन । दशैं महिलाशक्तिको सम्मानको सांस्कृतिक परम्परा हो । पितृसत्ताको उदयदेखि अधिकांश क्षेत्रमा शक्तिहीन पारी हेपिँदै आएका महिलाको सवलीकरणकालागि पनि दशैंलाई नयाँ ढंग र उमंगसाथ मनाएर प्राचीन संस्कृतिलाई नयाँ रुप दिनु जरुरी छ ।
आदिशक्ति मानिने नारीको शक्तिपूजाको यो पर्वमा व्यवहारिक रूपमै नारीप्रतिको सम्मान उसको क्षमतामा विश्वास र सह—अस्तित्वको स्वीकृति हाम्रा लागि आकाशका फल बनिरहेका छन् । तर पनि बादलमा चाँदीका घेरा भनेजस्तै हाम्रो शासन व्यवस्थाका उच्च तहमा महिलाहरू आसिन हुन सफल भएका छन् । चुनौतीपूर्ण कामहरूमा महिलाहरू अग्रसर छन् । विभेद विरुद्धका खबरदारीहरू चुनौती निर्माण गर्न प्रयत्नशील छन् । अब यी जगमा टेकेर समृद्ध र विभेदरहित समाज निर्माण हाम्रो चुनौती हो । सम्भावना अनन्त छन् तर चुनौती पनि उत्तिकै सबल छन् । हामी सबैको मानसिकतामा व्याप्त विभेदले हाम्रो चिन्तनसंगै व्यवहार, नियम, भाषाजस्ता सबै व्यावहारिक तत्वहरूलाई महिलामैत्री बन्न दिरहेका छैनन् । हामी पहिले चिन्तन सुधार्ने कि व्यवहार भनेर रोज्ने स्थितिमा छैनौं । अब दुबैमा सँगसँगै परिमार्जन जरूरी भैसकेको छ ।
नारीसम्मानको यो पर्वमा सबैले गम्भीर बनेर सोचौं । के हाम्रा आमा दिदी छोरीहरू हाम्रो संस्कृतिले भनेजस्तै सम्मानित र सुरक्षित छन त ? प्रत्येक पाइला पाइलामा विभेद, हिंसा र यातनामा रुमल्लिएको नारीशक्तिको उपेक्षा गरेर केवल क्षणिक अर्चनाले यो संस्कृतिको मूल मर्म स्थापित हुन्छ त ? दशैंलाई माया गर्ने सबै गम्भीर बनौं । नारीशक्तिप्रति पूर्ण सम्मान गर्ने समाज र राष्ट्र निर्माणकालागि आफू आफ्ना व्यवहार र चिन्तनको आत्म समीक्षा गरौं । र सच्याउन शुरू गरौं । अनिमात्र हामी गौरवान्वित हुन सक्नेछौं आफ्ना संस्कृति प्रति, आफ्नो समाज र राष्ट्रप्रति । विजयादशमी, तिहार र छठ पर्वको उपलक्ष्यमा सबै नेपाली दिदीबहिनी र दाजुभाईहरूमा चेतना र जागृतिको मंगलमय शुभकामना ।